PVE Combat Rogue - WoW Class Guides - Welcome from War Citadel Forum
By Poutsa, September 17 in WoW Class Guides
*အခုမှ Rogue စဆော့တဲ့ newbie များ နဲ့ မသိသေးတဲ့ သူများအတွက် ပါ နော်(လိုတာ ရှိလဲဝန်တာမိပါ)*
အရင်အပတ်က Assassination Talent building နဲ့ Rotation လေး ကို သိသလောက်မှတ်သလောက်လေး ကလိထားပေးတယ်ဆိုတော့ ဒီ တစ်ပတ် မှာ တော့ လူကြိုက်များလှတဲ့ Combat ခေါ်နောက်ပိုင်း Patch တွေမှာ နာမည်ပြောင်းသွားတဲ့ Outlaw (ဘာမှ ဟုတ်ဘူး နာမည်လေးလှလို့ ထည့်ကြေငြာတာ 😄 )ကိုကို အသုံးပြု ပုံလေးကို ပညာရှင်များထံမှ လေ့လာပီး တတ်သလောက်မှတ်သလောက် လေး ပြန်လည်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်နော်.
အရင် အပတ်က Assassination Guide နဲ့ ယခု Outlaw လေးရဲ့ ကွဲပြားမှု Critical point လေးတွေကို ပါထည့်သွင်းရေးပေးသွားမှာပါနော်.
ပထမဆုံး အနေနဲ့ ဒီ combat rogue လေးမှာ တောင် Type နှစ်ခု ရှိပါတယ် .မိတ်ဆွေရဲ့ Item က Perfect GS ကိုရောက်နေပီလို့ ကိုယ့်ကိုကို ထင်ရင် ဒုတိယ မြောက် Talent ဖြစ်တဲ့ Eviscerate Building ကို အသုံးပြုနိုင်ပီး Low GS ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ Hit Rating,Expertise, Armor Penetration တို့ ရှိသင့်သလောက်မရှိသေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် 1st build ဖြစ်တဲ့ Rupture Type ကိုအသုံး ပြု ဖို့ စာရေးသူမှ အကြံပြုပါတယ်. စကားချပ်=Rogue တစ်ကောင်မှာ အနည်းဆုံး Hit Rating-8%, Expertise-21,Armor Penetration-about200 အနည်းဆုံးရှိသင့်ပါတယ်(အနည်းဆုံးကိုမရှိမဖြစ်ပါ). ကဲစလိုက်ရအောင် .......
-Perfect match glyphs တွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?
- Glyph of Killing Spree
- Glyph of Rupture or Glyph of Eviscerate တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.
*Gameplay and Rotations.***
ပထမဆုံး Poisoning မှာ Main Hand ကို Instant Poison သုံးပီး Off hand ကို Deadly Poison သုံးဖို့ တော့ သင့်တာဝန်နော် မိတ်ဆွေ 😄 .Rotation လေးဆက်လိုက်ရအောင်........
သိပ်တော့အခက်ကြီးလည်း မဟုတ်လှ ဘူးဗျ သူ့Rotation က အရင်ဆုံး Slice and dice ရဖို့3combo Point ရအောင် Sinister strike နဲ့ ၃ချက်လောက် ဗြင်း ပလိုက်.ကဲ ပီးရင်တော့ Main ဖြစ်တဲ့ Rupture ကို ထည့်ရမယ့်အချိန်ရပီး ...ထွေထွေထူးထူးတော့မလိုပါ ဘူးဗျ. Sinister လေးနဲံ့ ပဲ Full combo ရိုက်ပီး ထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲ [Adrenaline Rush] ကို လို အပ်တဲ့ ထင်ရင်သုံး ,မလို ဘူးထင်ရင် မသုံးနဲ့ ဗျာ မိတ်ဆွေ သဘောရှိသလို အဆင်ပြေသလိုသာကြွေး လိုက်.ကဲ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Slice and Dice လေးကလဲ ကျန်သေးတယ် .Rupture လေးကလေး အဆက်မပြတ်ဆိုရင် တော့ Combo တွေအလားကားမဖြစ်အောင် Eviscerate လေး ကလိပေါ့ဗျာ.ဒါပဲ ဘာမှခက်ဘူးရယ် ရွှီ ရှောင်လေး ဒိုးလိုက် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် အယ်လယ် (ရွှီရှောင်ဆိုပေမယ့်လို့ အထင်မသေးလိုက်နဲ့နော်ကိုယ့်လူ Damage က အော်တို ၂ဆ တွေ ကြမ်းနေမှာ ).
-Combat Vs Assassination
Assassination မှာတော့ Combo ၁ ခု ၂ခု ရဖို့ Energy များများသုံးပေးရတာ ကြောင့် Target အပြောင်းအလဲ မှာ Energy မလောက်ပဲ ထိုင်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ရှိတတ်ပါတယ်.Combat မှာ မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတော့ ရှိတယ် ရှားတယ်ဆိုသလိုပဲ Combo ၁ခု ကို Energy များများစားစားသုံး စရာသိပ်မလိုတာကြောင့် Raid မှာ Combat မှ Combat ဖြစ်နေကြတာ ပါ.
ဒါဆို Assassination ဆော့ရမလား Combat ဆော့ရမလား ? Assassination ကို အခုဆော့နေတယ် Combat ကိုသူများတွေက အားပေးတယ်ဗျ ပြောင်းလိုက်ရမလား ? ဒီလိုမေးခွန်းတွေ ဆိုရင်တော့ သင်ပြောင်းချင်ရင် အစတည်းက သင့်ဘာသာ သင်ပြောင်းလိုက်မှာပေါ့ လာ မမေးဘူး ဟုတ် ? ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သာဆော့ ကိုယ့်လူ 😄 ကိုယ်ထင် ကုတင် ရွှေထီး ပဲဗျို့.....................
ရေးသားသူ-ခေးတို့ ချစ်တဲ့ Poutsa
*အခုမှ Rogue စဆော့တဲ့ newbie မြား နဲ့ မသိသေးတဲ့ သူမြားအတှကျ ပါ နျော(လိုတာ ရှိလဲဝနျတာမိပါ)*
အရငျအပတျက Assassination Talent building နဲ့ Rotation လေး ကို သိသလောကျမှတျသလောကျလေး ကလိထားပေးတယျဆိုတော့ ဒီ တဈပတျ မှာ တော့ လူကွိုကျမြားလှတဲ့ Combat ချေါနောကျပိုငျး Patch တှမှော နာမညျပွောငျးသှားတဲ့ Outlaw (ဘာမှ ဟုတျဘူး နာမညျလေးလှလို့ ထညျ့ကွငွောတာ 😄 [Click and drag to move] )ကိုကို အသုံးပွု ပုံလေးကို ပညာရှငျမြားထံမှ လလေ့ာပီး တတျသလောကျမှတျသလောကျ လေး ပွနျလညျရေးပေးလိုကျပါတယျနျော.
အရငျ အပတျက Assassination Guide နဲ့ ယခု Outlaw လေးရဲ့ ကှဲပွားမှု Critical point လေးတှကေို ပါထညျ့သှငျးရေးပေးသှားမှာပါနျော.
ပထမဆုံး အနနေဲ့ ဒီ combat rogue လေးမှာ တောငျ Type နှဈခု ရှိပါတယျ .မိတျဆှရေဲ့ Item က Perfect GS ကိုရောကျနပေီလို့ ကိုယျ့ကိုကို ထငျရငျ ဒုတိယ မွောကျ Talent ဖွဈတဲ့ Eviscerate Building ကို အသုံးပွုနိုငျပီး Low GS ဒါမှမဟုတျ သငျ့ရဲ့ Hit Rating,Expertise, Armor Penetration တို့ ရှိသငျ့သလောကျမရှိသေးတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာဆိုရငျ 1st build ဖွဈတဲ့ Rupture Type ကိုအသုံး ပွု ဖို့ စာရေးသူမှ အကွံပွုပါတယျ. စကားခပျြ=Rogue တဈကောငျမှာ အနညျးဆုံး Hit Rating-8%, Expertise-21,Armor Penetration-about200 အနညျးဆုံးရှိသငျ့ပါတယျ(အနညျးဆုံးကိုမရှိမဖွဈပါ). ကဲစလိုကျရအောငျ .......
-Perfect match glyphs တှကေရော ဘာတှဖွေဈမလဲ ?
- Glyph of Rupture or Glyph of Eviscerate တို့ပဲဖွဈပါတယျ.
ပထမဆုံး Poisoning မှာ Main Hand ကို Instant Poison သုံးပီး Off hand ကို Deadly Poison သုံးဖို့ တော့ သငျ့တာဝနျနျော မိတျဆှေ 😄 .Rotation လေးဆကျလိုကျရအောငျ........
သိပျတော့အခကျကွီးလညျး မဟုတျလှ ဘူးဗြ သူ့Rotation က အရငျဆုံး Slice and dice ရဖို့3combo Point ရအောငျ Sinister strike နဲ့ ၃ခကျြလောကျ ဗွငျး ပလိုကျ.ကဲ ပီးရငျတော့ Main ဖွဈတဲ့ Rupture ကို ထညျ့ရမယျ့အခြိနျရပီး ...ထှထှေထေူးထူးတော့မလိုပါ ဘူးဗွာ Sinister လေးနဲံ့ ပဲ Full combo ရိုကျပီး ထညျ့ပေးလိုကျရုံပဲ [Adrenaline Rush] ကို လို အပျတဲ့ ထငျရငျသုံး ,မလို ဘူးထငျရငျ မသုံးနဲ့ ဗြာ မိတျဆှေ သဘောရှိသလို အဆငျပွသေလိုသာကွှေး လိုကျ.ကဲ နောကျတဈဆငျ့အနနေဲ့ Slice and Dice လေးကလဲ ကနျြသေးတယျ .Rupture လေးကလေး အဆကျမပွတျဆိုရငျ တော့ Combo တှအေလားကားမဖွဈအောငျ Eviscerate လေး ကလိပေါ့ဗြာ.ဒါပဲ ဘာမှခကျဘူးရယျ ရှီ ရှောငျလေး ဒိုးလိုကျ အဆငျပွသှေားလိမျ့မယျ အယျလယျ (ရှီရှောငျဆိုပမေယျ့လို့ အထငျမသေးလိုကျနဲ့နျောကိုယျ့လူ Damage က အျောတို ၂ဆ တှေ ကွမျးနမှော :classic_rolleyes:).
Assassination မှာတော့ Combo ၁ ခု ၂ခု ရဖို့ Energy မြားမြားသုံးပေးရတာ ကွောငျ့ Target အပွောငျးအလဲ မှာ Energy မလောကျပဲ ထိုငျနရေတဲ့ အဖွဈမြိုး ရှိတတျပါတယျ.Combat မှာ မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတော့ ရှိတယျ ရှားတယျဆိုသလိုပဲ Combo ၁ခု ကို Energy မြားမြားစားစားသုံး စရာသိပျမလိုတာကွောငျ့ Raid မှာ Combat မှ Combat ဖွဈနကွေတာ ပါ.
ဒါဆို Assassination ဆော့ရမလား Combat ဆော့ရမလား ? Assassination ကို အခုဆော့နတေယျ Combat ကိုသူမြားတှကေ အားပေးတယျဗြ ပွောငျးလိုကျရမလား ? ဒီလိုမေးခှနျးတှေ ဆိုရငျတော့ သငျပွောငျးခငျြရငျ အစတညျးက သငျ့ဘာသာ သငျပွောငျးလိုကျမှာပေါ့ လာ မမေးဘူး ဟုတျ ? ကိုယျ့စိတျကွိုကျ သာဆော့ ကိုယျ့လူ 😄 [Click and drag to move] ကိုယျထငျ ကုတငျ ရှထေီး ပဲဗြို့ .....................
ရေးသားသူ-ခေးတို့ ခဈြတဲ့ Poutsa
Edited September 17 by Poutsa
Go To Topic Listing WoW Class Guides